Sekoly Kilonga - Sekoly Iraisam-pirenena ao Lyon
Sekoly voalohan'ny taona sy Sekoly Kilonga
Ao amin'ny sampana voalohan'ny taona (EYU: Transition-, Pre-, Junior and Senior Kindergarten) ary sekoly ambaratonga voalohany (Grade 1-5), ny fahalianan'ny ankizy sy ny hafanam-po voajanahary no fototry ny fomba fianarana mifototra amin'ny fanadihadiana amin'ny fampiasana ny International Baccalaureate's. Programan'ny taona voalohany (PYP) izay nahazoan'ny sekoly fankatoavana feno. Izany dia ampiharina amin'ny alàlan'ny fomba fiasa mifototra amin'ny lalao ao amin'ny EYU.
Ny PYP dia manomana ny mpianatra ho lasa mpianatra mavitrika, miahy, mandritry ny androm-piainana izay maneho fanajana ny tenany sy ny hafa, ary manana fahafahana handray anjara mavitrika sy mandray andraikitra amin'ny tontolo manodidina azy. Amin'ny fampiasana ny maodelin'ny fandaharam-pianarana PYP mifantoka amin'ny ankizy, ny mpampianatra ISL dia mamorona tontolom-pianarana manaitaitra sy isan-karazany ahafahan'ny mpianatra tsirairay mandroso araka izay tratrany. Amporisihina ny ankizy hizara ny traikefany ara-tsosialy sy ara-kolontsaina samihafa ary hampivelatra ny fahaizany misaina mamakafaka, mifandray ary ho mpandray anjara mahaleo tena sy mamorona amin'ny fianarany manokana. Ny fivoaran'izy ireo manokana dia kolokoloina amin'ny alàlan'ny Profile Learner izay ivon'ny PYP sy ny filozofia IB amin'ny ankapobeny.
Ny fomba fanombanana isan-karazany, ao anatin'izany ny fandinihan-tena ho an'ny mpianatra sy ny fanombanana ny tena sy ny mpiara-mianatra, dia mamela ny fanombanana mitohy ny fizotran'ny fianarana sy ny fanehoan-kevitra tsy tapaka ho an'ny ankizy sy ny ray aman-dreny.
Ho fanampin'ny fiteny (famakiana, fanoratana ary fifandraisana am-bava), matematika, siansa, teknolojia ary fandalinana sosialy, dia manolotra fandaharana ara-javakanto, mozika, hetsika ary tantara an-tsehatra manankarena izahay mba hanentanana ny fahaiza-mamorona amin'ny sehatra rehetra amin'ny fandaharam-pianarana sy ny pastôraly isan-kerinandro, sosialy ary Ny fotoam-panabeazana ara-batana dia manatsara kokoa ny fivoaran'ny tena manokana. Ireo mpianatra ao amin'ny Kilonga koa dia mandray soa avy amin'ny programa PE voalanjalanja ao anatin'ny fandaharam-potoanany isan-kerinandro, amin'ny fampiasana fitaovana toy ny toeram-panatanjahantena kelintsika sy ny terrain astro-turf multi-sports vao haingana. Ankafizin'ny mpianatra eny amin'ny ambaratonga voalohany ihany koa ny fampiasana ny dobo filomanosana ao an-toerana mandritra ny taona.
Ireo vao manomboka amin'ny teny anglisy manomboka amin'ny Grade 1 no ho miakatra dia omena fanohanana amin'ny ESOL (Anglisy ho an'ny Mpandahateny amin'ny Teny Hafa) amin'ny vidiny fanampiny raha ilaina ary ny ankizy rehetra dia mianatra teny frantsay ho fiteny vahiny na firenena niaviany.
Ny mpianatra EYU sy ny Kilonga dia mandray soa avy amin'ny fitsidihana matetika any ivelany sy ny dia mifandray amin'ny Sampana fanadihadiana azy ireo, ary ny kilasy rehetra ao amin'ny kilasy 1-5 dia mankafy fitsangatsanganana isan-taona mandritra ny telo andro farafahakeliny. Laharam-pahamehana ny fitsangatsanganana any Frantsa na any amin'ireo firenena mifanolo-bodirindrina amin'ny sekoly mba hanamafisana ny dian'ny karbaona ho faran'izay kely indrindra ary hampiasana ny haren'ny zavatra azo atao tsy misy dia lavitra loatra.
Nanao fitsidihana fanombanana IB PYP ny sekoly ambaratonga fototra tamin'ny Oktobra 2021, niaraka tamin'ny tatitra mamirapiratra avy amin'ny ekipa mpitsidika izay nilaza fa ny sekoly dia nahafeno ny fepetra rehetra ilaina amin'ny fiverenana amin'ny IB. Ny valisoa lehibe indrindra azon'ny ISL anefa dia ny nandre tamin'izy ireo fa 'faly' ny teny henony matetika tamin'ny tafatafa nifanaovana tamin'ny mpianatra, mpampianatra ary ray aman-dreny!
Modely momba ny fandaharam-pianarana IB Primary Years Program (PYP).
Ho an'ny antsipiriany momba ny fandaharam-pianaranay voalohany dia jereo ny antontan-taratasinay PYP:
Torolàlana momba ny fandaharam-pianarana voalohany ISL
Andrasana taranja fototra
NB Ny fampianarana sy fianarana rehetra ao amin'ny PYP dia tohanan'ny ISL's Vina, soatoavina ary iraka ary ny Ny mombamomba ny mpianatra IBO.